waxaa maamula 20-08-21
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira laba dariiqooyin wax soo saar oo kala duwan oo warshadaha BOPET ah, mid ayaa ah habka goynta, mid kalena waa mid toos ah. Kahor 2013, suuqa inta badan wuxuu ku saleysanaa habka goynta, halka wixii ka dambeeya 2013, la soo saaray hanaan socodka. Marka loo eego tirakoobka Zhuo Chuang, dhamaadka dhamaadka ...
Xaaladda Hada taagan iyo Rajada laga qabo Cillada PTA iyo Suuqa
PX waa sheyga ugu horreeya ee waxsoosaarka guud ee dhammaan warshadaha polyester ， Isbeddelka warshadiisa wuxuu saameyn gaar ah ku leeyahay guud ahaan warshadaha gaarka ah. in ay si rasmi ah u galaan horumarka is-waafajinta Shiinaha ee Cilmi-baarista Wadooyinka. Marka hore, fiiro gaar ah u yeelo siinta PX iyo de ...
28dii Sebtembar, munaasabaddii deegaanka ee Suqian Green Industry Expo ayaa lagu qabtay furitaankii weynaa ee Bandhigga Suqian. Mawduuca Bandhigga Cagaaran waa “cagaar, is-dhexgal iyo boodbood”, Diiradda saare warshadaha cagaaran iyo dhaqaalaha deegaanka si loo fuliyo gorgortanka dhaqaalaha iyo ganacsiga ...
Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Jiangsu ayaa booqday agabka Genzon Novel Materials
Bishii Sebtember 25, Shirkii Dhiirigelinta Kormeerka Mashruuca Kor u Qaadida Mashruuca Dhismaha Gobolka Jiangsu waxaa lagu qabtay Gobolka Shuyang, Shuqian City. Kulanku wuxuu diiradda ku saaray heer-gobol iyo waxsoosaarida diiradda lagu saaray- si loo dhawro kulanka tallada. Muwaadiniinta gobolka ee khusaysa ...
ISO9001: 2015 Heerka Tababarka Nidaamka Maareynta Tayada
Markay ahayd Disember 13, Qalabka GENZON Novel wuxuu fuliyey laba maalmood oo tababar caadi ah nooca nooca 2015 ee nidaamka maaraynta tayada. Guud ahaan 48 qof ayaa kaqeybgalay tababarka. Goobta tababbarka Bilowga kulanka, Mr. Zhang Tao, oo ah hayada la talinta ee Valin, ayaa ugu horreyn siiyay s ...
Tan iyo qalabkii Genzon Novel wuxuu dhammeystiray isku-darka iyo dib-u-habeynta hantida oo wuxuu xaqiiqsaday bilowga habsami u socodka ah ee wax soo saarka, dhinaca kaliya…
Tan iyo markii Genzon Novel Materials ay soo gabagabeyneysay midabaynta iyo dib-u-habeynta hantida oo ay xaqiiqsatay bilowga habsami u socodka ah ee wax soo saarka, dhinaca kale, Genzon wuxuu diiradda saarey soo bandhigida karti-xirfadeedka sareysa, sameynta Nidaamka iyo nidaamka tababarka shaqaalaha, dhinaca kale, fulinaya calaamad cusub ...